Filtrer les éléments par date : lundi, 20 mars 2017
lundi, 20 mars 2017 21:07
Fiofanana: Fiarovana ny sisin-tany
Manomboka androany 20 martsa ka hatramin’ny 7 aprily 2017 dia hisy ny fiofanana ho fiarovana ny sisin-tany hiarahana amin’ireo tatsambo vahiny izay hifanome traik’efa amin’ny Madagasikara sy Comore.
Ny CRIMARIO moa no mikarakara izany na ny Critical Maritime Routes Indian Ocean. Miisa 12 izy ireo no mpiofana mandray anjara amin’izany.
lundi, 20 mars 2017 20:00
Anosy: Fankalazana ny Andro iraisam-pirenena ho an’ny frankofônia
Nankalazaina androany faha 20 martsa ny andro iraisam-pirenena ho an’ny frankofônia, nisy ny lanonana izay natao noentina nankalazana izany andro izany, ka tonga nanotrona tao avokoa ireo avy amin’ny andrim-panjakana maro na Malagasy na vahiny.
Ny praiministra lehiben’ny governemanta sy ny minisitrin’ny raharaham-bahiny no nandray izany tao amin’ny Ministeran’ny raharaham-bahiny Anosy.
Nisy ihany koa ny fanolorana mariboninahitra ho an’ireo teratany vahiny.
lundi, 20 mars 2017 14:55
Ambatoboeny: Natao fanaovana propangady fotsiny ny làlana
Leo tanteraka ny fampanantenana poakaty ny mponin'ny Ambatoboeny, Faritany Mahajanga, satria rehefa tonga ny fampielezan-kevitra dia samy mampanatena fanamboaran-dalana avokoa ny kandida, nefa rehefa lany dia tsy misy asa vita ny làlana.
Miala eo amin'ny sampanana RN4, Andranofasika mandeha aty Ambatoboeny dia alaina ora 5 ny làlana mirefy 23 km, ary 15 000 ariary (75 000 fmg) ny saran-dalana.
Nefa dia faritra mamokatra tokoa i Ambatoboeny.
lundi, 20 mars 2017 14:25
Vohibato: Nifananao Tsitsika ny vahoaka manoloana ny ady amin'ny dahalo
Nanao Tsitsika niraisana ireo mponin'ny Vohibato ao anatin'ny Kaominina 16 rehefa samy resy lahatra amin'ity tsy fandriampahalemana ity.
Izany dia natrehan'ireo Ben'ny Tanàna na ny solontenany avy isaky ny Kaominina. Tomponkevitra tamin'izany moa ny Solombavambahoaka lany tao amin'ny Distrikan'i Vohibato ny Colonel RANDRIANATOAVINA Jean Martin.
Nisy ny vono omby sy kabary fanozonana izay rehetra mikasa hanao ratsy ao Vohibato. Nanaraka ny fepetra ara-drazana ity hetsika ity ka niafara tamin'ny Saotsa, fomba fanao aty Vohibato io.
Nanambara ny Solombavambahoaka Martin fa ho fongorina tanteraka ny asa ratsy aty Vohibato na asan-dahalo na politika maloto ka nifampitsitsihina teto.
Velombolo ny mponina satria endrika iray hamerina ny hasin'ny fandriampahalemana eto Vohibato ny Tsitsika izay efa nisy tany aloha fa nisy nanapotika taty aoriana.
lundi, 20 mars 2017 14:17
Fianarantsoa : Tolotanana Antsakabary
Hanatanteraka hetsika voin-kava-mahatratra hotanterahina amin’ny sabotsy 25 marsa ho avy izao ao amin’ny Lapan’ny Ankizy eo Ambalapaiso, ka anentanan’ny Vaomiera sosialin’ny Diosezy Katolika ny vahoakan’i Fianarantsoa sy ny tsara sitrapo rehetra hanampiana ireo Malagasy mpiray tanindrazana traboina noho ny doro trano nataon’ny Polisy tany an-toerana ny tapatapaky ny volana febroary 2017 lasa teo.
lundi, 20 mars 2017 14:00
Sambava : Ady amin’ny aretina lefakozatra na polio
Miofana mandritra ny roa andro manomboka androany ireo mpiasan’ny serasersa aty SAVA. Tanjona ny hanamafisana ny fahaizamanao ho an’ireto mpanentana sy mpamokatra fandaharana amin’ny haino aman-jery amin’ny fifehezana ny lohahevitra mikasika ny Fanamafisana ny andron’ny vaksiny fanefitry ny lefakozatra na FAV/Polio araka ny toromariky ny ministeran’ny fahasalamam-bahoaka.
Tonga nanokatra izany tamin ny fomba ofisialay ny talem-paritra ny fahasalamana SAVA, Dr Sevamanana Serzhino.
lundi, 20 mars 2017 13:41
Fianarantsoa-Ambalavato : Nanafaingana ny fiasan'ny mpitandro filaminana ny haterezan'ny Fokonolona nahatratra jiolahy iray namono olona
Omaly 19 marsa tamin'ny 7 ora hariva no nisian'ny fifamaliana tamin'ny lehilahy roa tao amin'ny toeram-pisotroana iray ka niafara tamin'ny tsatok'antsy ny ady.
Namoy ny ainy ny iray tamin'izy ireo ka nandositra ny nahavanon- dratsy. Nanenjika azy hatrany Andriamboasary, 3 kilometatra miala an'io toerana io, ny Fokonolona ka niverina teo amin'ilay tanana nisehoan'ny tranga.
Tamin'ny 12 ora alina dia efa voafehy ny raharaha sy tonga teo am-pelatanan'ny mpitandro filaminana ny olona nanatsatoka antsy.
Nahiana mafy ny fihoaran'ny hatezeran'ny vahoaka nanatrika tao anatin'io tranga io nandritra ny adiny efatra nisehoan'ny raharaha io.
Efa eny anivon'ny Commissariat Ankofafa ny lehilahy tratra namono olona ka tsy nampahafantarina ny rehetra ny toerana itazonana azy ankehitriny ialana amin'ny fitakiana fitsaram-bahoaka.
lundi, 20 mars 2017 12:39
Ben'ny Tanàna Antsakabary: Marary mafy
Noho ny fandarohan'ireo polisy azy tamin'ny raharaha Antsakabary iny dia re zao fa niakatra eto Antananarivo ny Ben'ny Tanànan'Antsakabary Franck Lemont mba hanaraka fitsaboana.
Ireo namana sy fianakaviana moa no manao tsipaipaika amin'izany fa ny fanjakana sy ny polisy nahavanon-doza dia miriaria tsy misy mandray andraikitra.
Hatreto dia araky ny fiteny any amin'ny faritra Sofia dia "Ampongamben'ny Mandritsara, ny fanampiana lazaina ho tonga, ka ela naharignesana" (Fampanantenana poakaty hatreto, feo fotsiny no heno fa tsy misy fanampiana tonga)
Ezahina hafenina hatrany ity vaovao momba ny Antsakabary ity, na ny fanadihadiana tokony ataon'ny fitsarana aza tsy misy feo, nefa ny rehetra, hatramin'ny filohan'ny SMM na ny syndikan'ny mpitsara aza dia efa nanameloka ampaha-bemaso ny polisy nahavanon-doza.
lundi, 20 mars 2017 12:12
Fianarantsoa : Rajery nihaona tamin'ireo mpankafy eto an-toerana
Mankalaza ny faha 37 taona niakarany an-tsehatra i Rajery, 25 taona eo amin'ny tontolon'ny mozika manerantany. Ny zoma alina lasa teo izy sy ny iray tarika aminy no nanomboka ny fanamarihana izany teto Fianarantsoa.
Nanotrona azy tamin'izany ny mpanakanto mivoy ny mozika ba-gasy betsileo Imaintsokely sy ZMG.
Tao amin'ny ivontoerana Alliance Française Tsianolondroa ny fampisehoana no natao.
lundi, 20 mars 2017 11:35
Maroantsetra : L’accès vers l’aéroport reste difficile
Maroantsetra panse ses plaies et la ville se remet petit à petit du passage du cyclone Enawo. La route qui mène vers l’aéroport reste difficile. Les usagers doivent emprunter une longue déviation pour y accéder.
L’association des taximen font des cotisations pour prendre part aux réparations comme le colmatage des nids-de-poule sur la chaussée.